Iyo iPhone mune vezvenhau | IPhone nhau
Kuvhurwa kweiyo iPhone chinhu chinopfuura chero muganho. Uchida kana kuti kwete, ndicho chirevo chisina chokwadi mumusika wefoni mbozhanhare, sosi huru yemari yekambani yakaita seApple, hombe pasirese, uye chinhu chishuwo chemamirioni avanhu chinokonzeresa mitsetse mirefu yekutenga kwavo. pane kumakonzati mazhinji kana mafainari emitambo. Izvi zvinokonzeresa kuti mazuva ano Apple inopfuura chinodzivirira chemablogiki ehunyanzvi uye ndiyo protagonist yeterevhizheni nhau uye dzakawanda nhau mumapepanhau. Iyo "mainstream midhiya" inoenderana nekuvhurwa kweiyo nyowani smartphone, uye zviongorori zvemidziyo hazvisisiri pane YouTube nzira dze "mageeks" kuti iye zvino zvionekwe pamawebhusaiti emapepanhau akareba.. Ko venhau venhau vanobata sei nhau dzetekinoroji? Ngatizvionei nemimwe mienzaniso inotora mukana weiyo iPhone 7 ongororo.
1 Varombo uye akaenzana ongororo
2 Mahedhifoni, makuru protagonists
3 Zvikonzero zvisere zvekusatenga iyo iPhone 7
4 Chinhu chakakosha ndechekuti vataure nezvako
Varombo uye akaenzana ongororo
Zviripachena kuti vezvenhau vakaita saEl País uye chero rimwe bepanhau reboka rayo havana chete zviwanikwa zvinodiwa kuti vakwanise kutumira vanyori vavo uko kune nhau, mune ino nyaya kuratidzwa kweiyo iPhone 7, asiwo Ivo vanofarirwa neApple, iyo isingovakoke chete kuchiitiko asi zvakare ichivapa ekuyedza zvishandiso pamberi peumwe munhu kuti iwe ugone kumhanyisa yako ongororo panguva chaiyo yekutangisa zviri pamutemo. Ichi chinhu icho vazhinji vedu tinogona kungofungidzira nezvacho, uye icho chisingazomboitika, uye ndosaka pamwe kunzwa kwe "mukana wakarasika" kana uchiona kuwanda kwenyaya dzakaburitswa munhau dzambotaurwa, mukunyora nekuenderera vhidhiyo.
Kuongorora kweMacBook mune iyo ukobvu hwakavhiringidzika nema inchi eiyo skrini
Isu tatoona kuti pane dzimwe nguva hukobvu hwe laputopu hwakavhiringidzwa nehukuru hwechidzitiro mumasendimita, kana masimba akajeka eiyo MacBook nyowani akamira seimwe yeakakosha maficha, chimwe chinhu icho munhu wese anoziva nezvenyaya iyi. anoziva izvozvo kwete.isi chokwadi zvachose, asi zvinopesana. Iyo iPhone 7 haina kumbosiyana panguva ino, ine yakawanda inotsausa dhata uye vamwe kunyangwe manyepo kuti zvese zvavanowana kuita kuvhiringidza muverengi anouya kuzotsvaga ruzivo. Sezvandambotaura kare, kuve ne iPhone 7 muruoko pamberi peumwe munhu uye kuita ongororo mune izvo zvinomira pachena kuti "kamera inokwira kusvika gumi nemaviri Mpx" kana iri iyo yakafanana nhamba yeiyo ma12s, kana kuti nekuda kwekuramba kwemvura "iyo iPhone inogona kutowira mugirazi" inonzwika , zvirinani, mukana wakarasika. Iko iripi iyo iPhone 7 Plus kamera yekushandisa demo? Kana kuti AirPods inosangana sei ne iPhone?
Mahedhifoni, makuru protagonists
Icho chave chiri chimwe chezvinhu zvine nharo zvakanyanya zvakagadziriswa mukuongorora, uye mune izvo zvisizvo zvisirizvo zvakaitwa. Takakwanisa kuverenga, kuona nekunzwa zvese. Zvichida chimwe chezvinyorwa zvinonyanya kushamisa chave chiri cheiyo IDEAL pepanhau reGranada, «Zvichakubhadhara iwe kuteerera mimhanzi pane iyo iPhone 7«, Mairi Ivo vanovhiringidza maAirPod nemaEarPods, kunyangwe hazvo vachisanganisira pikicha yeAirPods iyo inonyatsoonekwa kuti haina waya, asi ivo vanosimbirira kuti havazokwanise kushandisa nekuchaja iyo iPhone panguva imwe chete.
AirPods nyowani dzeApple dzakagamuchira kushoropodzwa kwakawanda pamutengo wavo uye nekuoma kwekuchaja foni panguva imwe chete.
Asi mimhanzi ichanzwika sei kana nhare ichichaja? Mhinduro ndeye Apple kuchaja base, ye59 euros muzvitoro. Saka pamusoro peiyo 769 euros yeiyo iPhone 7 uye iyo 179 euros yeAirpods, angangoita makumi matanhatu mairi mamwe achafanirwa kushandiswa pachiteshi chekuchaja.
Capture yevhidhiyo yaEl Mundo pane iyo iPhone 7
Haisati iri yega svikiro iyo isina kunyatsonzwisisa shanduko yaApple maererano nehedhiyo jack. «Uchafanirwa kurasa mahedhifoni ako akajairwa» uye «uchafanirwa kutenga mamwe mahedhifoni kuti uterere kumimhanzi» anga ari mamwe emitsara yatakakwanisa kuverenga zvakanyanya munhau zhinji, Pasina kuratidza, isu tinofungidzira kuti nekuda kwekusaziva, kuti iyo iPhone 7 inosanganisira Mheni mahedhifoni mune ayo ese mavhezheni uye zvakare, kana iwe uchida kushandisa ako akajairwa mahedhifoni, mheni-jack adapta.. Kupesana nezvinotaurwa naEl Mundo muvhidhiyo yavo, hazvidiwe kutenga isina waya yemusoro.
Zvikonzero zvisere zvekusatenga iyo iPhone 7
Ongororo dzinoenda zvakatowanda, uye vezvenhau pachavo vanonetseka kuti sei kukakavara kwakanyanya pamusoro peiyo iPhone 7 (ivo pachavo pavanogadzira), vachitoburitsa chinyorwa muEl País na 8 zvikonzero zvekusatenga iyo iPhone 7. Mukutsvaga nharo dzekutsigira izvo zvirevo, bepanhau pacharo rinoshandisa kunetseka kurodha pasi mavhidhiyo, mafirimu uye kunyorera kubva kunze kwechitoro chepamutemo uye kusakwanisa kushandisa vatengi veTorrent sechimwe chezvikonzero. kwete kutenga Apple smartphone. Pepanhau senge El País inotsigira humbavha hwemavhidhiyo, mimhanzi nekushandisa? Dai ndisina kuverenga nemaziso angu, ndingadai ndisina kumbozvitenda. Zvakanyanya kuoma kunzwisisa ndizvo zvaanoreva kana achinongedzera kuti iyo iPhone haigone kutaurirana nemamwe mafoni kupfuura Apple (anogona mumwe munhu kunditsanangurira?) Kana kunyange kushandisa iyo 13.000 mamirioni faindi yenyaya yeIreland, izvo chaizvo hazviiti iyo yakanaka , asi sekunge zviripo, hazvina basa kana tiri muchikamu cheEconomics chepepanhau renyika.
Kana iwe ukatenga iyo iPhone iwe unopinda yakavharwa zvakasikwa zveIOS. Uye izvo zvinoreva kuti yako smartphone ine mukana mushoma wekutaurirana nemamwe mafoni asingamhanye neApple yekuzvarwa inoshanda sisitimu.
Uye zvakare, iwe unofanirwa kupfuura nemasefa akaisirwa neiyo mhando (iTunes, Mepu, Safari, Apple Chitoro, nezvimwewo) kutanga kunyorera kana kurodha mafaera. Kudhaunirodha rwiyo kana kunakidzwa nefirimu kunogona kuita hope pa iPhone iyo inorambidza mamwe marudzi emafaira (akadai seBitTorrent).
Kana iwe ukatenga iPhone, unobatana mukutiza mutero. Zvirinani ndizvo zvinofungwa neEuropean Commission, izvo zvakango gadza faindi ye13.000 miriyoni paApple yekugadzira netiweki yemakambani muIreland kudzivirira kubhadhara mitero munyika zhinji dzeEU.
Chinhu chakakosha ndechekuti vataure nezvako
Kunyangwe iri yakaipa, ndizvo zvinowanzo taurwa mune idzi kesi. Apple iri kuve pakati pekutarisisa kwepasirese pasi mazuva ano kune yayo iPhone 7, uyezve Izvo hazvina basa zvakanyanya kwauri kana vezvenhau vakavhiringidza mahedhifoni kana kuti iyo mbiri kamera iri yakasarudzika kune iyo iPhone 7s (izvo zvisipo izvozvi). Asi semuverengi uye semuchina anonyora zvekunakidzwa, nekuti ini handisi mutori venhau uye handizvinyepere kuva, handigone kubatsira asi kushamisika kuverenga zvimwe zvezvinhu zvandakaverenga mazuva ano.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Iyo iPhone mune vezvenhau
Ndiri kufarira mimhanzi uye mumapepanhau mazhinji akajairika vanovhiringa makore ekuburitsa marekodhi, mazita, vagadziri. Nekureruka kwazvo kuita tsvagiridzo yeGoogle kuti uve neruzivo zvishoma uye usamhanye
Ndiri kushamisika, zvinoseka kuti kusaziva kwakadii uye iprocrisy, zvirokwazvo ipapo munhu wese achaenda ne iPhone yake ichiratidza zvakadaro pane zvakawanda zvinopesana neApple zvandisingazombonzwisise, kuvhura zvigadzirwa zvaunofarira uye nevamwe zvausingade, asi haugone kuvhota chiratidzo chakadai, sei hongu. Ini handitenge galaxis asi ini ndinoda Samsung, Sony uye LG TV zvakanyanya
Manuel Ruiz Roman akadaro
Mangwanani akanaka, ini ndiri fan weApple, nguva refu isati yaonekwa iyo IPhone, ndichitsvaga ruzivo rwakawanda nezve iPhone 7 plus, iyo yandakawana imwe uye ndakamirira kuigamuchira, ndakaverenga chinyorwa chenyika, iyo iwe unoreva uye ini handigone kumira kufunga nezve rudzii rweutapi venhau, kwete chete tekinoroji kana isiri padanho reruzhinji, isu tinayo munyika ino, nekuti ini ndaive ndichiiverenga, ndaisatenda tsamba dzeaifungidzirwa nyanzvi, zvinonyadzisa, avo vasina kudzidza vanyori vanonyora zvinhu zvisina musoro zvakadaro uye vogara vakadzikama uye vachibhadharisawo.
Kutenda kumawebhusaiti akaita seaya uye sevamwe vazhinji, masangano asiri epamutemo anotibatsira kusarudza kana kutipa ruzivo rwakakwana nezve edu gadget, ndatenda nerubatsiro rwenyu, ini ndine yekutanga pane yangu yandinoda rondedzero.
Pindura kuna Manuel Ruiz Roman
Ndakaverengawo chinyorwa mupepanhau El País uye ndakashamisika kuverenga zvese zvawataura mune yako chinyorwa, ndakashamisika nekusaziva kwemupepeti uya nezve Apple nyika. Hazvirevi kuti anoda kumutsoropodza asi kushaya kwake kushinga kwakawedzeredzwa mupepanhau remwero iwoyo.